I-7 Izinyathelo Zokusebenzisa I-Framework Skills Framework Hlela | Buka
I-7 Izinyathelo Zokusebenzisa I-Framework Skills ye-IT
New Amakhono we-#IT kudingeka ukuba abhekane nokwamukelwa kokuthuthukisa amasha, isibonelo, ukuphathwa kwezinsiza zokuhlela, ukuphatha, ukuphathwa kwezinga lokuhlomula, njalonjalo. Umbuzo uwukuthi, "Ingabe nguweAbameli be-T abalungiselele ngokwanele futhi abanelungelo elanele ukuze kuqiniswe ukwemukelwa, ukuqaliswa, ukusetshenziswa, nokuphathwa kwemiklamo ekhulayo? "
Ukuthumela isakhiwo sekhono le-IT akuyona into ekhumbuza ingqondo naphezu kokuthi kuthatha umthwalo wemfanelo, ukuhlela kanye nempahla. Ekugcineni, kuzosiza ekubuyiseni jikelele kwi-investment (ROI) yebhizinisi. Ungacabanga ngalokhu njengokufana nezindleko ezihlobene nokugcina imishanguzo engaphelele. Ukukhishwa okusha kwemisebenzi ekugcineni kungaletha ukwandiswa izindleko eziphelele zefa (TCO), ukusetshenziswa okungenzeka okuphezulu kokusebenza (OPEX) futhi wehle isithunzi nje samanje (NPV).
Ngemva kokucabanga ngokubandakanyeka kwami ​​ekusebenzeni nezinhlangano ze-IT ukuthumela amakhemikhali amakhono e-IT, ngifake inqubo ibe yimigomo eyisikhombisa eyinhloko noma izigaba ezingenzeka. Into ebalulekile okumele uyikhumbule yile nqubo yokubuyisela, okusho ukuthi isenzo asiqedi esiteji sesikhombisa. Ukuguquka okuqhubekayo ngaphakathi kwenhlangano akuphepheki. Ngale ndlela, inhlangano kufanele ikwazi ukucabanga kabusha ukuthi ikhono layo le-IT lisetjenziswa njani lihlala lilungele isiqondiso esibalulekile sebhizinisi. Isigaba ngasinye sesishiyagalombili sikhulunywa ngenye imininingwane ephawulekayo ngaphansi.
Isinyathelo 1: Thola isiqondiso esibalulekile senhlangano.
Isinyathelo 2: Qonda ukubaluleka kokuba namakhono afanele.
Isinyathelo 3: Yenza ukuzinikezela kubonise ukuthi yimaphi amakhono adingekayo.
Isinyathelo 4: Thola amakhono adingekayo.
Isinyathelo 5: Hlola ukulungiselela amakhono.
Isinyathelo 6: Izikhwama zekhwalithi.
Isinyathelo 7: Gcina amakhono abalulekile.
Okubaluleke kakhulu, ukukhetha isinqumo esiyinhloko senhlangano yindawo eyisisekelo yokushintshwa kwebhizinisi. Yini isimo esizayo se- ibhizinisi lifana? Yiziphi amakhono IT kudingeka ukuba ibhizinisi lifeze isimo salo esizayo? Ngabe abalingani bebhizinisi balindela kusuka enhlanganweni ye-IT? Kuvamile ezinhlanganweni zezinkombandlela kanye nokulindela kwamayunithi okukhethekile okumele aqondiswe kabi nalabo be-IT inhlangano. Isinyathelo sokuqala mayelana nokuthatha ukucaca mayelana nokuqondiswa okusemqoka kwebhizinisi.
Ukubaluleka kokuba namakhono afanele kuvunyelwe ngokushayela i-ROI yebhizinisi, ukusekela abalingani nokunika amandla inhlangano ye-IT ukuqinisa isiqondiso esibalulekile sebhizinisi. Ukuba namakhono alungile ngesikhathi esifanele kubeka inhlangano ye-IT endaweni yokwamukela, ukuvuselela nokugcina ikhono elisha lokuguqulwa kwebhizinisi. Ukuba namakhono alungile ngenye into ngaphandle kokufaneleka kwe-IT. Ukuthumela amakhemikhali amakhono e-IT kudinga ukuthi ochwepheshe be-IT babe nokuxhumana okungapheli ngamayunithi akhethekile, baqonde izinhloso zebhizinisi kanye namasu futhi bazi ukuthi basebenza kanjani futhi bakulindelwe. Amakhono obucayi, isibonelo, ukukhulumisana, ukuxoxisana, ukuphathwa komlingani, ukwandisa ukuphathwa, kanye nokuphathwa kobudlelwane bamakhasimende, kuphakama ngokubonakalayo kubalulekile.
Ngesikhathi ithumela Amasu omsebenzi we-IT, ukuzinikezela ukwenza kanjalo kufanele kube khona phezu kwazo zonke izigaba zenhlangano kusuka ekuxhasweni okusemthethweni kanye namapholisa okubangela wonke umphakathi obandakanya abantu bazoba yiziqu ezidingekayo esenzweni. Into ebalulekile ukukhumbula ukuthi ukuthumela i Isakhiwo samakhono e-IT iyinhlangano yokuthuthukisa inhlangano nezobuchwepheshe hhayi isenzo sokuphatha ukubulawa. Ngethuba elihle lokuthi abantu abadingayo kule nqubo bazizwa behlukunyezwa yilokho okuzikhandla, khona-ke bayayeka ukugxila ekuqinisekiseni ukuchuma kwayo. Ukungaziphathi kahle ngalokho okwenziwayo kungenye yezinguquko eziphambili zokufeza izinhlaka zamakhono we-IT. Izinhlangano zivame ukuqhubekela phambili ekudluliseni amakhemikhali amakhono e-IT njengoba zizama ukuzama ukusebenza njengesenzo sangasesikhathini esingaphambene nokuzixhumanisa ekusebenzeni kwazo zonke izinsuku. Ukuhluka okubalulekile kokuphumelela kunika abantu isilinganiso esithile sesikhathi sabo esiphelele esenziwa ekuthumeni uhlelo lwe-IT.
Lokhu kuqhubeka kudinga ukuthatha i-gander ezingxenyeni zokuqashwa ezidingekayo ngaphakathi kwenhlangano ye-crosswise ezindaweni ezihlukahlukene zokusebenza. Ukuqaphela amakhono abalulekile kuvumela inhlangano ukuba ihlole isimo sayo samanje futhi isungule isimo sayo esizayo. Sonke sazi ukuthi izingxenye zomsebenzi ezihlukile zinamakhono amaningi adingekayo naphezu kokuthi lokhu kuqhubeka kubalulekile ukugxila emakhono amancane amathathu kuya kwamane. Lokhu kuqhubeka kugxila ezingxenyeni zomsebenzi, okungafani nezezinhlawulo zemithwalo yemfanelo. Izinhlangano zigcina zigcinwe esimweni esibi uma zigxila ezingxenyeni ezikhona zomsebenzi kanye nokuzibophezela kwabantu abangaphakathi kwalezi zinxenye zomsebenzi. Ukuhlukanisa izingxenye zokusebenza zomsebenzi wesikhathi esizayo kanye namakhono okumele akhishwe kubantu abaningi okwamanje kulezi zingxenye zomsebenzi. Izingxenye zomsebenzi zingabonakaliswa ukunikeza indlela engaqondakali futhi enamandla ukuze abantu bathuthele baqale ngezinga elilodwa bese beya olulandelayo, noma ngisho nangakwesokunene, behluke ngaphezu kwezigaba zokusebenza.
Uma ngabe izingxenye zomsebenzi zesikhathi esizayo zombuso ziveziwe, le migqa elandelayo ukuhlola ukutholakala kwamakhono kwenani elikhulu labantu enhlanganweni. Gcina engqondweni: lokhu kuyintuthuko yezobuchwepheshe, hhayi isenzo sokuphatha ukubulawa. Ivumela abantu ukuba bahlukanise imikhakha yabo yamakhono futhi bahlele isigaba sokuvuleka kwezingcweti. Ukuhlolwa kwamakhono okuphoqelela kufanele kufake ukuhlonipha imigodi yamakhono ezingeni ngalinye, ngaphakathi kwendawo yokusebenza jikelele futhi ekugcineni yonke inhlangano ye-IT.
Manje abantu bangasetha ukuthuthukisa nokuhlela izinhlelo ezilungiselelwe amakhono ayisihluthulelo okudingekayo. Ukuba nokuqonda emakhakheni amakhono akhona kwenza inhlangano ikwazi ukubona kahle ukuthi ukuthuthukiswa nokuzivocavoca kufanele kwenziwe kanjani ekwandiseni umnotho wezinga lokuthuthukisa nokulungiselela izinhlelo zokuchitha imali. Ezimweni lapho kudingeka khona amakhono ngokushesha, lokhu kusiza inhlangano ukuthi ikhethe ukuthi yiziphi amakhono amasha okufanele atholakale ngokuthola noma ukuthengisa abantu abanabo amakhono.
Lokhu kungukuqala kwenqubo yokubuyisela ukukhawulela umgodi wamakhono. Njengoba abantu bethola amakhono amasha ngokuthuthukisa nokuzivocavoca, bangakwazi ukuzihlola. Njengoba ukuguqulwa kwebhizinisi kuyaqhubeka kubalulekile ezinhlanganweni, inqubo yabo izokhula ngendlela efanayo futhi iphoqele izinguquko zokuvuselela isakhiwo sabo, amafomu, isakhiwo senhlangano, nokunye. Ngenxa yalokho, lokhu kudinga ukuqhutshwa okuqhubekayo ukuhlola ukutholakala kwamakhono ayisihluthulelo e-IT. Uma inhlangano izuze lokhu kuqhubeka ekudluliseni uhlelo lwezobuchwepheshe be-IT, iningi lentsha-mali isetshenzisiwe njengamanje.
Izinhlangano ze-IT kufanele ziqinisekise ukuthi zinamakhono afanele ngesikhathi esifanele ukuqinisa isiqondiso esiyinhloko sebhizinisi. Ukuveza uhlelo lwamakhono we-IT lunikeza izinhlangano ezinhlanganweni ze-IT ukunquma izinga labo lokutholakala ngokuhlukanisa lapho kukhona khona imikhakha yekhono futhi kwakhiwe isakhiwo sokuvula lezi zigobo. Njengokuqala, ukugcina uhlelo lwamakhono we-IT kuzoqhubeka nokunikeza abanye amandla okubambisana ngenkathi ukungalondolozi kuyophinde kube negalelo ekwandiseni imikhakha yamakhono.
Isimo se-Agile - Isihluthulelo Sokufeza Ukufaneleka Kweqiniso